♪ ကွန်ပြူတာမှာ လေးလံစေမယ့်အရာများကိုရှင်းလင်းပေးမယ့် - Wise Care 365 Pro v4.73 Build 456 Final + Keygen ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Wednesday, October 11, 2017 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
မိမိကွန်ပြူ တာမှာ လေးလံစေတဲ့အရာတွေကို သန့်ရှင်းပေးမယ့် Wise Care ဆော့ဝဲလ်လေးကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်တာကတော့ Registry Cleaner , defragment , Disk Cleaner အပြင်အခြားများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်သန့်ရှင်းပြီးတာနဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်စီစစ်ပေးတဲ့ Disk defrag လေးနဲ့ အဆုံး သတ်ပြီးတာနဲ့ မိမိစက်ကအရင်ထက်ပိုပြီးပေါ့ပါးသွားစေပါတယ်။ ဘေးနားမှာအချိန်နေ့ရက်ဖြင့် Auto ပေး ထားပြီးခိုင်းလို့လဲရပါတယ်။ “One Click Tune-up” လေးဖြစ်ပြီးဝင်းဒိုးအားလုံး 32-bit and 64-bit အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခြားသော system တွေအားလုံးကိုသန့်ရှင်းပေးမယ့် ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးပဲဖြစ် ပါတယ်။ Recover lost files တို့အပြင် Auto shut down တွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ PreActivated လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း full အဖြစ်အသုံးပြုရမှာပါ။ အမြဲတမ်း Full Version အနေနဲ့ သုံးနိုင်အောင် Keygen တို့ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Keygen ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ Antivirus ကိုပိတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ဗျာ။
Wise Care 365 : is an all-in-one PC tune-up utility. It will keep your Windows secure, clean and fast. Wise Care 365 isafull collection of Wise Disk Cleaner and Wise Registry Cleaner. However, with other attractive and exciting features, it is far more than that. Wise Care 365 will keep your PC in tiptop shape and at peak performance! What you need to do is just one click when you use Wise Care 365. And your old PC will turn intoabrand new and blazing fast one after Wise Care 365′s automatic cleanup and tuneup. Wise Care 365 can detect more hidden invalid registry issues than CCleaner, which is accredited by Gizmos and PCWorld. The scanning speed of Wise Care 365 is twice as fast as CCleaner, not to mention Advanced System Care Pro 5. All the features in Wise Care 365 are highly reviewed by PCWorld, PCAdvisor, ComputerBild, CHIP, CNET, ZDNet, and so on.
Posted in: Computer Softwares
အင်​တာနက်​အသုံးပြုသည့်​ လက်​ကိုင်​ဖုန်းတိုင်း ထည...
Internet Download Manager 6.29 Build2Full-Cracke...
ဂိမ်းကြိုက်သူများအတွက် - Clash of Clans Version 9....
apk app game crack တွေ ဒေါင်းရန်
Sony က ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Xperia X နဲ့ ...